09 | June | 2008 | San Oo Aung's Weblog
Monks and students reject junta’s constitution
Posted on June 9, 2008 by sanooaung
Jun 5, 2008 (DVB)–The All-Burmese Monks’ Alliance, 88 Generation Students and All Burma Federation of Student Unions issuedajoint statement yesterday rejecting the state constitution adopted by the military regime last week.
The organisations also urged the people of Burma and the international community not to accept the constitution that formally createsarepressive military class and legalises prolonged military rule in Burma. Continue reading →
Filed under: Blogging, Burma, Burmese, English Article, Human Rights, Myanmar, Myanmar Military, Politics, SPDC | Tagged: 88 generation students, Burma, constitution, dvb, Myanmar, referendum, UN |	Leaveacomment »
Danish art group ridicules Nay-Pyi-Daw(in Burmese)
ဒိန်းမတ်အနုပညာရှင်အဖွဲ့ နေပြည်တော်ကို ဒုတိယအကြိမ်ပညာပြ
ဇွန် ၈၊ ၂၀၀၈
ဒိန်းမတ်အနုပညာအဖွဲ့ Surrend က အင်တာနက်ဝက်ဆိုက်တစ်ခု ပြုလုပ်ပြီး မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်များကို သရော်လှောင်ပြောင်လိုက်သည်။မြန်မာဒေါ့ကွန်နှင့် ဆင်တူယိုးမှား ၀က်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာဒေါ့ကွန်တွင် ‘a’ တစ်လုံးထပ်ထည့်ကာ
http://www.myanmaar.com/ ဟု အမည်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ စစ်အစိုးရအပေါ် ၎င်းတို့၏ သရော်ချက်များဖြင့်လည်း မွမ်းမံထားသည်။အဆိုပါ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် နာဇီခေါင်းဆောင် ဟစ်တလာ၏ရုပ်ပုံကိုလည်း ထည့်သွင်းထားသည်။ အချိတ်အဆက်ခေါင်းစဉ်များတွင်လည်း နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်း၊ အနုပညာနှင့်အကြမ်းဖက်မှု၊ လူမှုဘ၀-အဂတိလိုက်စားခြင်း၊ စိစစ်ကန့်သတ်မှု စသဖြင့် တွေ့ရသည်။
“ဒီလုပ်ရပ်ကြောင့် အာဏာရှင်အစိုးရက ဒေါသထွက်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်၊ ပြီးတော့ မြန်မာပြည်သားတွေက ရယ်မောကြမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဝက်ဆိုက်က တာဝန်ကျေပါပြီ” ဟု Surrend အဖွဲ့ ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Pia Bertelsen က ပြောလိုက်သည်။
Filed under: Blogging, Burma, Burmese, English Article, Human Rights, Myanmar, Myanmar Military, Politics, SPDC | Tagged: art, Burma, Danish, Myanmar, Naypyidaw |	Leaveacomment »
Foreign Aid for Myanmar Still Struggles to Get In
YANGON, Myanmar — Two weeks after Myanmar’s government promised to open its doors to foreign-aid workers, little has changed for relief staff here, and in some ways the situation has worsened.
Access to the country’s devastated Irrawaddy River delta has improved forafew relief organizations, including groups affiliated with the United Nations, since U.N. Secretary-General Ban Ki-Moon met with Myanmar’s top generals in late May and appeared to extractapromise for greater access to victims.
But most foreigners are still being refused entry, not just to the worst-hit region but in some cases to Myanmar itself. Aid workers also say foreign visa requests are being sent all the way up to Myanmar’s cabinet, which meets only once every two weeks, and even then many requests aren’t approved.
Filed under: Blogging, Burma, Burmese, English Article, Human Rights, Myanmar, Myanmar Military, Politics, SPDC | Tagged: ASEAN, Burma, cyclone Nargis, Myanmar, UN |	Leaveacomment »
Joke:Myanmar Currency Notes (In Burmese)
ပိုက်ဆံအကြောင်းပြောရင်း ပိုက်ဆံနဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့ ကိုယ်တွေ့ကြားဖူးတာလေးကို မျှလိုက်ပါဦးမယ်။လဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ထိုင်နေတုန်းကပေါ့။
လူငယ်နှစ်ယောက်စကားပြောကြရင်း … တစ်ယောက်က
“ငါတို့ နိုင်ငံက ပိုက်ဆံတွေမှာ_
အရင်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ ဆရာစံတို့ ပုံတွေပါတယ်။
အခုကျတော့ ဘာလို့ ခြင်္သေ့တွေ ဖြစ်ကုန်တာလဲ မသိဘူး” တဲ့
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက ဘယ်လိုဖြေရင် ကောင်းမလဲ စဉ်းစားနေတုန်း ဘေးဝိုင်းက ဦးလေးကြီးတစ်ယောက်က ၀င်ဖြေလိုက်တယ်
“ရှုင်းပါတယ် ငါ့တူရာ … အခုခေတ်က တိရစ္ဆာန်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့ တိုင်းပြည်မို့လို့ တိရစ္ဆာန်ပုံတွေကို ပိုက်ဆံမှာ ထည့်ထားတာပေါ့”
ဦးလေးကြီးပြောသွားတဲ့ စကားကို သေချာစဉ်းစားကြည့်ပြန်တော့လည်း … အင်း … +..-…#..*..%
Source Chan Mya Soe’s blog
Filed under: Blogging, Human Rights, Myanmar, Myanmar Military, SPDC | Tagged: Joke, Sataire |	Leaveacomment »